ငရမန်ကန်း (သို့) ရာမန်ခန်း အငြင်းပွားမှု့ကို စမ်းစစ်လေ့လာခြင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Glass Palace Cronicles of Kings of Burma
၂၀၁၄-ခု သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမည့် ပုံစံအကြောင်း တစေ့တစောင်း »
Tags: Asia, Burma, Burmese Indians, Muslim, Mya Aye, Myanmar, Nga Yamankan, Palace, Rhaman Kham, YAMAN KHAN
This entry was posted on January 10, 2013 at 7:15 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “ငရမန်ကန်း (သို့) ရာမန်ခန်း အငြင်းပွားမှု့ကို စမ်းစစ်လေ့လာခြင်း”
January 10, 2013 at 7:40 am | Reply
Bama military lapdogs are barking madly about this issue without reading the history by third party, non-Muslims. NowaJew,awhite-man andaBama, all are non-Muslims had supported the Muslims’ long history since the First Bama Empire. These books were written before Bama Nationalistic Military began the Ethnic Cleansing on Muslims of Myanmar including their HISTORY.
January 10, 2013 at 8:04 am | Reply
ဘယ်လောက်အထောက်ထားပြပြ၊ မျက်စိမှိတ်ငြင်းမှာပါ။ လူလူချင်းကိုကွယ်စိတ်က လူကိုလူလို့ပကတိအမှန်မမြင်တတ်တော့၊ အခြေခံအားနည်းပြီး စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် သံသယကင်းကင်း မကြည့်မမြင်တာပါ။ ဒိုတီ(မြန်မာအခေါ် ချီးကျုံးကုလားဝတ်စုံ) ကို ရိုးရာဓလေ့အရ ဂေါတမဗုဒ္ဓဝတ်ခဲ့တာကို၊ မြန်မာ့ဗုဒ္ဓဝင်တွေမှာ မြန်မာမင်းညီမင်း (ဇာတ်မင်းသား)ဝတ်စုံ ဝတ်ပေးထားတာကိုကြည့်ရင် မမှန်တာကို မျက်စိမှိတ် ဇွတ်မဆင်မချင် လက်ခံယုံကြည်နေတာ အခြေခံအားနည်းခြင်း မဟုတ်ပါလား။